यस्ता अवस्थामा खानुहुँदैन सोयाबीन, नखानुहोस् बढाउनेछ समस्या ! - ज्ञानविज्ञान
मसलालाई जहिले पनि सुख्खा स्थानमा राख्नुपर्छ ।
धेरै उज्यालो आउने स्थानमा मसला राख्नु हुदैन ।
मसला पारदर्शी बट्टामा राख्नुको साटो कालो र बाक्लो कभर भएको बट्टामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पिसिएको मसलालाई फ्रिजमा राख्नु हुदैन । फ्रिजमा मसला राख्दा त्यसको फ्लेवर नष्ट हुन्छ ।
पिसेको मसला भन्दा नपिसिएको मसला धेरै समय सुरक्षित राख्न सकिन्छ जसलाई आवश्यक पर्दा आवश्यकता अनुसार पिसेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Don't Miss it हाेसियार ! सुत्नु अघि बिर्सेर पनि गर्दै नगर्नुहोस यी कामहरू
Up Next हाम्राे भान्छामा प्रयाेग हुने प्लास्टिकको पन्यूँले बिगार्छ कलेजो